မန်းလေးထိသွားပြီး Valentine surprise လုပ်ခဲ့တဲ့ စိုင်းစိုင်း
On February 14, 2018 By fairy
နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲကွီးစိုင်းကတော့ ဒီနှစ် valentine မှာလဲ အားလုံးအားကျရအောင် surprise ကြီးလုပ်လိုက်ပြန်ပြီ။ ကဲ အားကျကြစမ်းကွား ယူတို့တွေ…..
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ရက်နေ့တုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ Sai Cosmetix ရဲ့ promotion မှာ ကံထူးသူဖြစ်တဲ့ fan တစ်ယောက်ကို အိမ်တိုင်ယာရောက် suprise လုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ရက် မနက်မှာပဲ ကွီးစိုင်းကိုယ်တိုင် မဲပေါက်ခဲ့တဲ့ Swe Yee Moe Wai ဆိုတဲ့ account ပိုင်ရှင်ဆီ သွားပြီး ပေးခဲ့တာပါ။ မဲပေါက်ခဲ့တဲ့ Swe Yee Moe Wai ရဲ့ account မှာ အဲ့ suprise လုပ်တုန်းက ပုံတွေအများကြီးတင်ထားခဲ့ပြီး အဲ့ပိုစ့်ကိုရှယ်ထားသူကလဲ ထောင်ကျော်ရှိပါတယ်။ ဆုမဲမှာကြေညာထားတဲ့ 5xLipstick / 1xEyeshadow + ပန်းစည်း ပါတဲ့ “Ti Amo” Valentine’s Gift Set တွေသာမကပဲ Teddy bear ကြီးတစ်ခုပါ ပါတာကို ပုံမှာတွေ့ရပါသေးတယ်။ အားကျချက်ပဲနော်…..သူများတွေကံကောင်းချက်များ။ အဲ့လိုလက်ဆောင်တွေထက် ကွီးစိုင်းကလာပေးတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်လေးတစ်ခုနဲ့တင် FA ဖြစ်ရတာ တန်နေပြီမလား ?
မနက်ပိုင်းမှာပဲ မန္တလေးထိသွားပြီး surprise လုပ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်တွေရဲ့ ကွီးစိုင်းကတော့ နေ့လယ်ပိုင်းမှာ သူ့ရဲ့ Sai Cosmetix promotion အဖြစ်ပြုလုပ်တဲ့ SAI Happy Valentine’s မှာ ပြန်လည်တွေ့ရပါတယ်။ ကြိုးစားချက်ပဲနော်။ အဲ့ပွဲလေးကိုတော့ ရွှေတိဂုံဘုရား အနောက်ဘက်မုဒ်၊ Myanmar Culture Valley အနောက်ဘက်က ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာကျင်းပခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆပ်ကပ်၊ မျက်လှည့်၊ ဟာသတွေနဲ့ ဂိမ်းအစီအစဉ်တွေအများကြီးပါဝင်ပြီး ဘန်နီဖြိုး၊ မေရီစတဲ့ နာမည်ကြီးအဆိုတော်တွေလဲအများကြီး ဖျော်ဖြေကြမှာပါ။
ကံစမ်းမဲတွေနဲ့ FA တွေအတွက်လဲ ထူးထူးခြားခြားအစီအစဉ်တွေအများကြီး ပါဝင်တယ်လို့လဲ ကြေညာထားလို့ ဘာတွေများဖြစ်မလဲဆိုတာတွေကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
ကွီးစိုင်းအနေနဲ့ နောက်နှစ်တွေမှာလဲ ဆက်ပြီး suprise လုပ်နိုင်ပြီး FA တွေလဲ ကံစမ်းမဲတွေပေါက်ကြပါစေလို့ ကြိုပြီး ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်…….
Image source : SaiCosmetix
PREVIOUS POST Previous post: Spice Girls အဖွဲ့ Reunion Tour ထွက်မှာမဟုတ်ကြောင်း Victoria Beckham ကရှင်းလင်းပြောကြား
NEXT POST Next post: NEVER BE THE SAME Tour 2018 ကိုကြေညာလိုက်တဲ့ Camila